Rafcaanka Ka -hakinta Amazon: Waxyaabaha la Samaynayo Ka -hakinta Iibiyaha Amazon
Samee & Wax Ha Sameyn Ka Dib Xayiraada Koontada Iibiyaha Amazon
Amazon ee iibiyeyaasha khadka tooska ah waa makka barakaysan. Iyo, waxay la mid tahay macaamiisha sidoo kale. Waxaa jira qaybo badan iyo alaabooyin kala duwan oo qofku iibsan karo. In kastoo, iyadoo ay sii kordhayaan tirooyinka iibiyayaasha ee sagxadda siinaya alaab aad u wanaagsan, haddana tirada rafcaanka ganaaxa Amazon sidoo kale way kordhay.
Tani waxay dhacday sababtoo ah tayada alaabada ku taal barxadda ayaa hoos u dhacday tirada macaamiisha aan faraxsanaynna way korodhay. Si loo hubiyo in macaamiisha Amazon ay ka helaan waxyaabaha ugu fiican internetka, Amazon waxay isku dayeysaa inay lahaato iibiyayaal tayo leh. Amazon waxay tan ku sameysaa iyada oo ku soo rogeysa siyaasado ka sarreeya iibiyaasha goobta. Iyo, haddii aan si sax ah looga ciyaarin iyaga markaa waxay laalayaan koontadooda. Waa dhacdo caadi ah oo waxaan nahay shirkad caawisa dadka u baahan.
In kastoo, haddii aad ku cusub tahay mowduucan markaa waxaan kugula talin lahaa inaad hoosta ka akhrido wax badan oo ku saabsan rafcaanka ganaaxa Amazon, iyo sida aan dadka uga caawinno koontooyinka iibiyaha ee la laalay.
Maxay ka dhigan tahay Joojinta Koontada Amazon?
Tirada sii kordheysa, waxaa jiray dhacdooyin aad u badan oo ka mid ah ganaax iibiyaha Amazon. Fikrad ahaan, waxaa jiri kara saddex shuruudood oo iibiyaha Amazon ay tahay inuu maro. Kuwani waa:
Ka joojinta: Haddii koontadaada la joojiyo taas macnaheedu waa waxaad sameyn kartaa Rafcaan ka joojinta Amazon. Tani waxay hubaal ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad la timaado qorshe waxqabad.
Diiday: Tani waxay ka dhigan tahay in iibiyaha uu sameeyay rafcaan ka joojinta Amazon laakiin waa ay diiday maamulka. Xaaladdan oo kale, qofku waa inuu la yimaadaa Qorshe Hawleed wax laga beddelay.
Banned: Tani waa qodobka dib u soo noqoshada. Racfaan ka qaadis la'aantu kuma badbaadin karto haddii koontadaada la mamnuucay.
Joojinta Amazon waxaa lagu soo koobi karaa labada hore. Haddii koontadaada la joojiyo ama racfaankaaga la diiday. Waxay si fudud uga dhigan tahay in Amazon ay rabto inaad wax ka beddesho oo aad hagaajiso adeegyadaada.
Laakiin, haddii lagaa mamnuuco masraxa oo runtii ah aagga mugdiga markaa dib u soo noqosho ma lahan. Mid ayaa laga yaabaa inuu ka fekero furitaanka koonto cusub laakiin taasi dhab ahaantii waxay ka soo horjeedaa siyaasadaha Amazon. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan jirin dariiq dhab ah oo lagu soo celiyo akoonkaaga. In kasta oo, tani kaliya ku dhacdo waxqabadyada ugu xun. Marka, haddii aad ogaal la'aan ugu jirto wareeggan markaa fursadaha ayaa ah inaadan heerkaas gaari doonin. Taasina dhab ahaantii waa lagu hagaajin karaa iyadoo la adeegsanayo rafcaan wax ku ool ah oo Amazon ah.
Inta badan Sababta guud ee Hakinta Amazon
Haddii aan bilowno inaan aqrino shuruudaha & xaaladaha Amazon markaa waxay qaadan doontaa waqti iyo jahwareer badan. Amazon oo ah barta ugu weyn ee ecommerce waxay weydiisataa inay raacdo xeerar iyo xeerar fara badan. Tani waa sababta ay tirada rafcaanka ka joojinta Amazon muddo in ka badan kor u kacday. Xaqiiqdii, waxaan si shaqsi ah u aragnay kor u kaca tirada dadka nagu soo wajahan ee rafcaanka ka joojinta Amazon. Haddii aan raacno buug-gacmeedka Amazon markaa waxaa jiri kara sababo badan oo dhan. Laakiin, dhammaantood waxaa lagu xoojin karaa saddex:
Sababta ugu badan ayaa ah ku xadgudubka siyaasadaha Amazon ay kaa codsaneyso inaad raacdo. Haddii aadan firfircooneyn markaa fursadaha aad leedahay waxaad ku xad gudbeysaa siyaasadda.
Meheraddaadu si qoto dheer ayey u quusaysaa. Amazon ma rabto inay madadaalo iibiyeyaasha iibkooda liito. Waqtiga intiisa badan, waxaa jira sababo adag oo ay tani u dhaceyso? Oo hadaad ka warqabto markaa hubso inaad hagaajisay.
Iibinta badeecad aan loo oggolayn madasha. Tani waxay sidoo kale ku dhici kartaa badeecooyinka jabiya Xeerarka IP.
Sidoo kale Akhri: Sababaha Hakinta Xisaabta Iibiyaha Amazon
Sideen ku helnaa mawduuca ganaaxa Amazon?
Adiga oo aan madaxeenna u wadin halkan iyo halkaas, habka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa iyada oo la hubiyo ogeysiiska ay soo dirtay Amazon. Haddii koontadaada la joojiyay markii ugu horeysay markaa waxaad u badan tahay inaadan dhag u dhigin. Laakiin, Amazon waxay hubisaa inay tilmaamayso qaladkaaga waana meesha aan isku dayeyno inaan ku caawino.
Intii aan maraynay ogeysiiska ay soo dirtay Amazon, waxaan bilaabaynaa shaqadeena si aan u abuurno koontadaada iibiyaha rafcaanka ganaaxa Amazon ee loo habeeyay.
Sidee looga hortagaa Hakinta Xisaabta Iibiyaha ee Amazon?
Qoritaanka rafcaanka ka joojinta Amazon waa buuq aan loo baahnayn markii qofku si fudud uga fogaan karo ganaaxa. Waxaan nahay adeeg rafcaan oo Amazon ah laakiin waxaan sidoo kale siinaa macaamiisheena faa'iidada ka-hortagga ka-joojinta.
Helitaanka koontadaada oo lagaa joojiyo ka dibna dib loo soo celiyo waxay umuuqataa wax caadi ah. Laakiin, maxaa dhacaya markii aad lumiso meheraddaada labadaas maalmood. Xaqiiqdii, tani waxay sidoo kale dhaawici kartaa kalsoonidaada iyo kala-soocidda alaabta nidaamka. Intaas waxaa sii dheer in dukaankaaga waqtigan la xiray oo macnaheedu yahay inaadan lacag heleynin.
Waxaan aad ugu fiirsanaa dhaqdhaqaaqyadaada madasha waana kugu hanuunin doonaa. Waxaan isku dayeynaa inaadan lagugu qaban waxqabad kasta oo xaasidnimo ah, ha ahaato ogaal ama ogaal la'aan. Ii aamin, macaamiil badan ayaa dareemaya inay qasan karaan oo shaqaalayn karaan qof sidayada oo kale ah. Laakiin, had iyo jeer uma shaqeyso sida aan dooneyno gaar ahaan haddii macmiilku uu ku celcelinayo khaladaad isku mid ah marar badan. Waxaan hubinaa inaadan khalad ku jirin oo aan raad ku hayno si caafimaadka koontada iibiyuhu u waarayo macaamiishana ay uga fogaadaan rafcaan kasta oo ganaax Amazon ah.
Sideen u abuurnaa Qorshe Ficil oo loo habeeyay hakinta Amazon?
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo u baahan in si toos ah loo sameeyo. Tusaale ahaan, hubinta ogeysiiska ay soo dirtay shirkadda Amazon markii laga joojiyay. Hubinta qiyaasaha iibiyaha si loo arko sida koontadaadu u shaqeyneysay waqtigan.
Si aan fursadahayaga u wanaajinno oo aan u abuurno kuwo habboon Qorshaha Waxqabadka (POA), waxaan isku daynaa inaan sida ugu macquulsan u helno. Iyo, waxaan sidoo kale isku daynaa inaan raaligelin ka bixino, waa erey fure ah oo runtii awood badan yeelan kara.
Hagaag, tan waxaan uqabanay tiro aad uqurux badan. Annaga oo fahmayna wax kasta oo nala siiyay, waxaan isku daynay inaanu samayno qorshe u adeegsanaya waxyaalahan muhiimka ah maaddooyinka:
Anaga oo wakiil ah ayaan qaadeynaa mas'uuliyadda wixii khasaaro ah ee dhacay. Ha noqoto madasha ama macaamiisha ama labadaba.
Isku day inaad sameyso sawir meesha aan ka dhigno inay dareemaan inay ku faraxsan tahay inay yeeshaan barxad sida Amazon oo kale ah. Xaqiiqdiina waa fursad aynaan jeclaan doonin inay qasto.
Ha dhaleecaynin wax iibiyaasha kale ama adeegyadooda. Amazon waxay ku qaadataa wakhti macquul ah laakiin waxay joojisaa qof kasta oo xadgudub ku ah.
Iyo sidii aan nidhi "raali galin" waa ereyga furaha.
Talooyin Kale oo Muhiim ah
Kuwani waxay u muuqan karaan inay yihiin wax sasabasho ah laakiin aniga aamin aniga dhammaantood waa run macquul ahaan. Amazon dhab ahaantii waxay siisay barxad dad badan oo loogu talagalay ganacsi daacad ah. Waxay siinaysaa fursado ku filan kuwa doonaya inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan ​​ganacsigooda. Awood u lahaanshaha inaad si toos ah uga iibiso macaamiishaada kale meelkasta oo ay joogaan waa wax qofkasta uu rajeynayey. Iminkana markay run tahay halkii laga mahdi lahaa, iibiyeyaal badan ayaa si fudud isugu daya inay uga faa'iidaystaan ​​yoolalka muddada-gaaban.
Hagaag, markaan ururinno dhammaan xogta si aan u dhisno rafcaan wanaagsan oo ganaax Amazon ah, ma deg degno. Waa lagama maarmaan in wax kasta oo loo dirayo Amazon ay yihiin kuwa ugu tayada fiican. Tani waxay umuuqan kartaa wax yar oo shaki ah laakiin xaqiiqda ayaa ah in haddii aad seegto isku daygaagii ugu horreeyay markaa dib u soo celinta waxay dhab ahaantii qaadaneysaa waqti badan.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aan u isticmaalno si aan u dhisno Rafcaanka Hakinta Amazon:
Waxaan isku dayeynaa oo kaliya inaan ka hadalno siyaasadaha iyo waxa xaq noo ah. Ma jirto sabab looga hadlo qiyaasta waxqabadka marka lagaa joojiyo. Xitaa haddii aad bixinayso lambarro ololaya, taasi macnaheedu maahan wax gaar ah haddii walaaca uu ka duwan yahay.
Waxaan hubineynaa in warqada aan soo dirnay aysan aheyn mid dheer dherer ahaan. Waxyaabaha dhaadheer waxay qaadataa waqti in la dheefshiido oo sidaas darteed gaaban iyo jajab waa habka ugu fiican ee lagu qoro rafcaanka ganaaxa Amazon.
Halkii aan ka isticmaali lahayn cutubyo dhaadheer oo sharraxaad ah, waxaan isku dayeynaa inaan qaabeynno amarkayaga 'amazon hakinta' annagoo isticmaaleyna dhibcaha iyo nambarada. Tani waxay umuuqataa heshiis yar laakiin waxay kaa dhigeysaa midkaaga amazon warqad racfaan dariiqad aad u jilicsan oo loogu talagalay takhasuska loo magacaabay Amazon.
Waxaan isku dayeynaa inaan iska ilaalino wixii macluumaad dheeri ah waxaanna diirada saareynaa kaliya arinta loo gudbiyay macmiilka. Tani ma wadin fiiro aan loo baahnayn meelo kale.
Shaqadayada bilowgeedu waa dhibaatada taagan. Halkii aan ka ciyaari lahayn wax eedeyn ah oo cidna ah, waxaan hubinaa in Amazon ay ogtahay inaan fahansanahay dambigayaga oo aan hagaajin doono ASAP, dibna aan dib ugu soo celin markale.
Tilmaam kale oo weyn, inta badan waxaan isticmaalnaa waa inaan qoro tuduc hordhac ah oo sharraxaya wax walba asal ahaan. Tani waxay u muuqan kartaa wax yar oo ka mid ah saamiga laakiin waxay u shaqeysaa sida sixirka. Kuwani waa talooyin aad u faa'iido badan inta aad sameyneyso rafcaanka ka joojinta Amazon. Iyo, guud ahaan waa qaabka aan ku ciyaarno gudaha laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in kaliya dhibaatada taagan ay go'aamin doonto sida wax looga qaban doono.
Maxaan ugu soo jeedinaynaa iibiyeyaashu inay xirfad u aadaan Racfaanka Hakinta?
Waa hagaag, tani waxay u muuqan kartaa wax yar oo yaab leh laakiin shucuurta ayaa noqon karta hal sabab weyn oo dib u celintaadu u qaadan karto waqti dheer. Waxaan la kulannaa macaamiisha maalin kasta kuwaas oo si daacadnimo ah uga shaqeynayay barxadda. Hase yeeshe, koontadooda waa la joojiyay sababtoo ah ma aysan ka warqabin ama si fudud uguma firfircooneyn waaxdan.
Xaqiiqdii, waxaan kuu sheegi karnaa macaamiisha si fudud uga fogaatay ogeysiiska Amazon sababtoo ah waxay joojinayaan iibinta mid ka mid ah wax soo saarkooda sababtoo ah dib u eegista isticmaalaha. In kasta oo kahor intaysan wax qaban, Amazon ay joojisay koontadooda.
Waxaa jira dad aad u tiro badan oo ku sugan madasha oo waqti badan siiyay inay dhisaan ganacsigooda. Qaadashada dhammaanteed isla markiiba waxay noqon kartaa wax badan oo badan. Iyo, waa muhiim inaad naftaada isku koobto. Iyo, ka sakow inaan nahay kooxdaadii ugu horreysay ee jawaabta markii la hakiyo, waxaan hubineynaa inaadan shaqada ka joojin marka hore. Waxaan @ APlus Global Ecommerce aaminsanahay nafteena inaan lashaqeyno macaamiisheena waqtiyada baahida. Ganacsigooda soo kobcaya ayaa ah guusheena.
Tilmaamaheena Ugu Dambeeya si looga fogaado qorista Cayrinta Amazon
Haa, waxaan nahay adeeg waxaana jecel nahay inaan ganacsi helno. Laakiin, tani macnaheedu maaha inaanan isku dayin inaan caawinno walaalaheen iibiya Amazon. Waxaa laga yaabaa inaan leenahay xirfado kala duwan laakiin waan fahamsanahay dhibaatadaada. In kasta oo ay jiraan adeegyo badan oo halkaa ka jira haddana qof kastaa wuxuu ku fakaraa inuu siiyo tallaal caddaalad ah isku dayga inuu isagu rafcaan u sameeyo Waxaa jira waxyaabo badan oo la dhihi karo laakiin marwalba way fiicantahay in laga fogaado ganaax kasta. Si taas loo sameeyo waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso.
Ka fogow iibinta nooc kasta oo alaabooyin xaddidan ah.
Waxaa jira iibiyayaal badan oo laga yaabo inay sidaas sameynayaan laakiin tani macnaheedu maahan inaad sidaas sameyso. Amazon waxay si gaar ah u faraysaa iibiyeyaasheeda tan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad si taxaddar leh u dhageysato haddii aad rabto inaad ka fogaato rafcaanka ka joojinta Amazon.
Isku day inaad iska ilaaliso iibinta
alaabooyinka laga yaabo inay shaki kugula muuqdaan. Haddii sheyga aad iibinaysaa uu u muuqdo ku dayasho qalab ama shaqadiisa, kaliya isku day inaad ogaato xididdada sheygaas. Waxaa jira culeysyo dad ah oo xisaabaadkooda laga joojiyo sababo la xiriira siyaasadaha xadgudubka IP. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee iibiyeyaal badani ay xisaabtooda uga joojiyaan.
La xiriir qareen.
Dabcan socodsiinta ganacsi micnaheedu waa inaad iibin karto wax kabadan hal shey. Tan macnaheedu waxa weeye haddii aad wax uun ka dareento sheyga aad iibinayso oo aad jeceshahay inaad sidaa yeelato markaa helitaanka la-tashiga ayaa ah waxa ugu fiican ee aad sameyn karto.
Iska ilaali inaad ku darsato faallooyinkaaga.
Faallooyinka ku saabsan Amazon waa tilmaamaha ugu muhiimsan ee tayada wax soo saarkaaga. Amazon ma rabto inaad isku daydo inaad ku bedesho si kasta. Waa muhiim inaad u qaadatid dib u eegistaas qaab dhismeed oo aad bilowdo inaad hagaajiso adeeggaaga adoo si fudud ugu hoggaansamaya iyaga. Dib u eegista macaamiisha ayaa ah meesha ugu horeysa ee qofku ka raadin karo dhaliil daacad ah iyo ammaan. Iyo haddii aad ku guuldareysato inaad sidaas sameyso markaa waxaad soo dhaweyn kartaa rafcaanka ka joojinta Amazon.
Ku kalsoonow sharaxaadaada.
Dad badan oo iibiyayaashu waxay ku sifeeyaan wax soo saarkooda si ka duwan sidii hore halka sheyga dhabta ah uusan aheyn sharaxaaddaas. Haddii Amazon ay hesho cabashooyin aad u tiro badan oo ku saabsan markaa waxaa suuragal ah inaad soo dhaweyso an Rafcaanka ka joojinta Amazon.
Helitaanka rafcaanka ka joojinta Amazon wuxuu noqon karaa dhibkii ugu xumaa ee soo mara. In kastoo, haddii aadan awoodin inaad wax ka qabato xaaladda markaa waxaad dhab ahaan na weydiisan kartaa inaan ku taageerno. Dhanka da'da, wali waxaan nahay curdin laakiin dhanka qibrada, waxaan haynaa qaar ka mid ah khubaradihii ugu khibradda badnaa Amazon ee rafcaan ka qaatay rafcaanka. Shaqaalaheennu waxay leeyihiin khibrad qoto dheer oo ku saabsan niche waxayna leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan oo berrinka ah. Marka taa laga reebo Aplus Global Ecommerce waxay bixisaa kale adeegyada sida ka-joojinta ka-joojinta, baaritaanka caafimaadka koontada, kor u qaadka iibka, iwm. Sidaa darteed, haddii aad raadineyso adeeg xirfad leh oo ku taageeraya markaa waxaa laga yaabaa inaan ku caawinno. Waxaan rajeyneynaa inay tani waxoogaa caawimaad ah kuu ahayd. Sidoo kale, waad ku mahadsantahay akhrinta ilaa dhamaadka.
Waxaan jeclaan lahayn inaanu kaa maqalno!